Puntland Oo Faahfaahin Bixisay Xidhiidhka Ay La Leedahay Imaaraatka – Heemaal News Network
Puntland Oo Faahfaahin Bixisay Xidhiidhka Ay La Leedahay Imaaraatka
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Gaas ayaa ka hadlay wararka sheegaya in maamulka Puntland ay xiriirka u jartay Dowlada Imaaraatka Carabta kana eriday deegaanadeena saraakiil tababarayaal u dhashay Imaaraatka.
Cabdiweli Gaas ayaa maanta booqday xeradda Ciidanka Badda Puntland ee gacanta ku hayso dowladda Imaraatka, waxa uuna beeniyay in wararka sheegaya in dowladda imaraatku ka guurtay Puntland ayna kala baxday saraakiil tababar u joogay xeradda Qow ee ciidanka badda Puntland.
Madaxweyne Gaas ayaa meesha ka saaray in xiriirka u dhaxeeyay maamulka Puntland iyo Imaaraatka uu xumaaday, waxa uuna xusay in Imaaraatka xiriir fiican kala dhaxeeyo ayna sii xoojin doonaan.
“Waxaan idiin sheegayaa in aan dowladda Imaraatka ka codsanay in ay sii wadaan tageeradda iyo tababaridda ciidankeena badda iyadoo lasii xoojinayo gacan siinta mashruuca,waxaad lasocotaan in dowladda imaraatku Puntland ka wadaan mashariic dhaqaale badan galayo,majirto cid noo badelaysa booska ay noo jogaan imaraadku,mana jirto cid noola siman”.Madaxweyne Gaas.
Xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Dowlada Imaaraatka Carabta ayaa meel xun gaaray, waxaana dhawaan Deegaanada Puntland isaga baxay saraakiil tababarayaal ah oo u dhashay Imaaraatka.
Warar Dheeraada Oo Aan Hadda Ka Helnay Khasaaraha Ka Dhashay Dagaal Ka Dhacay Tuulada Tukaraq
January 28, 2018 Soomaaliya
Dagaal saacado kooban ka socday duleedka magaalada Tukaraq ee gobolka Sool ayaa lagu soo waramayaa inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhawac soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay. Saraakiil ka tirsan dhinacyada halkaasi ku dagaalamay, ayaa […]
Al shabaab Oo Sheegatay inay Qarax ku Dileen Taliyihii Howlgalada Puntland.
Qarax nuuciisa uu ahaa Miinada dhulka lagu aaso ayaa Gaari Cabdi Bille ah oo ay wateen Ciidamada PIS-ta Puntland waxaa lagula eegtay duleedka magalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari. Gaariga Qaraxa lala eegtay ayaa wuxuu […]
Taliye Ku Xigeenkii Ciidanka Puntland Oo Mushahar La’aan Xilkii Uga Tagay
April 18, 2018 Soomaaliya
Taliye kuxigeenkii hore ee Ciidanka Darawiishta Dowladda Puntland S/G Dayr Xaaji Cabdi oo warbahinta gudaha la hadlay ayaa ka warbixiyey waxa ku kalifay inuu shaqadda ka tago iyadoo ay degaanka Tukaraq isku horfadhiyaan Ciidamadda Puntland […]